श्रीमती मेलिंडा गेट्स - पुस्तक दिनेता - प्रसिद्ध भन्नु
मेलिन्दे ढोका, 1 19 .64 मा जन्म 20, 19 .64 मा भएको अमेरिकी डक विश्वविद्यालयको कम्प्युटर प्रणालीको स्नातक भयो, र त्यसपछि MBrosoft र एक व्यवस्थापन व्यक्ति बन्न पुगे। विवाहित बिल गेट्स अघि मेलिन्डाले Microsoft मा एक प्रभावशाली प्रदर्शन बनाएको छ। उनी विभागको शिरको रूपमा सेवा गर्दैछिन् र उनको हातमा 100 भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। ढोका विवाह गरेपछि मेलिन्डा पूर्ण-समयकी श्रीमतीले गरे। मेलिंडाले आफ्नो परिवारलाई धेरै न्यानो पार्क गरे, र एउटा घर पुस्तकालय निर्माण गर्यो। मेलिंडा र ढोकाहरूको सबैभन्दा ठूलो आधार, फाउट्स जगमा स्थापित र अध्यक्षको रूपमा काम गरेको छ।
सन् 1 198 77 मा, मेलिंडा 22 वर्षको उमेरका थिए। उनी सरणस्थानमा आए र माइक्रोसफ्टमा बजार प्रबन्धकको रूपमा काम गरे। कान्छो कर्मचारीको रूपमा मात्र महिला एमबीए, त्यसपछि उनलाई थाहा थिएन कि Microsoft कसरी Microsoft को अर्थ के हो भनेर उनलाई थाहा थिएन। यो जताततै एक स्मार्ट व्यक्ति हो, तिनीहरूले यो संसार परिवर्तन गर्दैछन्। यद्यपि उनी कम्पनीको संस्कृतिको बानी छैन, उनी आफ्नो सिन्टेज महसुस गर्छिन्, उनी सोच्छे, हुन सक्छ उनीले छोडिनेछिन्। जीवन दुर्घटनाग्रस्त क्षणमा परिणत भएको छ। एक दिन चार महिना पछि, उनी पहिलो पटक न्यू योर्क गएकी थिइन्, जब उनले खाना खानुभयो, उनी सीईओ बिल फाउसमा छिन्। मेरिन्डा एक सुन्दर महिला हैन, तर पहिलो पटक सम्झन्छ, बिलले सँधै भने कि उनको लामो चरणले उनलाई आकर्षित गर्यो। "प्रिय, यदि तपाईंले समय जितेको छ भने, तब मैले पैसा जितेको छु", विली नेल्सनको गायन, बिल र मेलिन्डाले एउटा विवाह समात्य। त्यो दिन, त्यहाँ billion अरबपतिहरू, जव्वाईमा रान्नर, सबै सेडान, हेलिकप्टर र 5220 होटल कोठाहरूमा रान्नरमुनिमुलाहरू थिए। विवाह पछि, मेलिन्डाका तीन बच्चाहरू छन्। सन् 1 1996 1996 in मा ठूलो छोरीको जन्म पछि उनले पूर्ण-समयकी श्रीमतीलाई लगे र उनको बच्चाको हेरचाह गरे। Microsoft कोष पुतरले विश्वास गर्दछ, "उनले बिल द्रुत रूपमा द्रुत बनाउँछिन्। अन्यथा, बिलले उनलाई विवाह गर्दैन।
फोर्कले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली 1 15 जोडी, माइक्रोसफ्ट संस्था र विधेयक मेलिंडा मेलिंडा र विधेण क्लिन्टोन दर्जहरूमा ओगटेको थियो। संसारको सब भन्दा धनी, गेट्सको सम्पत्ति करीव $ 46 अर्ब डलर हो, तर प्राय जसो सम्पत्ती दान गरिएको छ। ढोकाले दिएको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण च्यानल "बिल र मेलिंडा गम्ट फाउन्डेसनहरू हुँदैछ।" फाउन्डेशनको जग अन्तर्गत कुल सम्पत्ति रकम2$ ..8 अर्ब डलर छ, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चरिता कोष हो। जगका प्रायोजकहरु मध्ये एकको रूपमा, मेलिन्डा 1 1996 1996 in मा पहिलो बच्चा पछि पहिलो बच्चाबाट राजी भए र त्यो जग निर्माणको लागि सक्रियतामा सहमत भए। ढोकाले एक पटक एक पटक एक जना आगन्तुकलाई भने कि यदि त्यहाँ मंजा छैन भने त्यहाँ कुनै आधार छैन। वास्तवमा, दिउँसो जनावरहरूले दिनहुँको लागि धेरै धन-सम्पत्ति पाउँदछन्, र उहाँसँगै रहन यी पैसा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले यी पैसा प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सोच्दछ। यद्यपि उनी विश्वको सबैभन्दा प्रचुर मात्रा सामग्री जीवनको आनन्द लिन पूर्ण रूपमा सक्षम छिन, मेलिन्डा साधारण महिला भन्दा फरक छ। मेलिंडा किनमेल र ड्रेसिंगको बारेमा भावुक होइन। उनको अभिनय एक आधुनिक व्यवसायिक महिला शैली हो। उनी दायित्व फाउन्डेशनको व्यवस्थापनमा धेरै प्रभावकारी छिन्।
कोष सम्पत्ति लगानीको सर्तमा, मेलिन्डाले ठूलो भूमिका खेले। जब उनी र ढोकाले नयाँ दान निर्देशन र दान स्थान छनौट गर्दछन्, तिनीहरूले दुई प्रश्नहरू सोध्नेछन्: सबैभन्दा प्रभावित व्यक्तिहरू के हुन्? विगतमा हामीले व्याकुल समस्या के हो? यद्यपि धेरै प्रकारका चराहरूले पनि यस्तै प्रकारले प्रयोग गर्छन्, ढोका जोडी बढी कडा हुन्छन्। मेलिन्डाले यसो भने: "हामी चन्दाका माध्यमबाट अधिकतम परिवर्तनहरू ल्याउनको लागि सबै अनुचित अनुचित कार्यहरू र प्रयास गर्न सक्दछौं। , अरबौं डलर दान। सामान्य परिस्थिति अन्तर्गत भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्ने खोप अनुसन्धान र खोपिएका वैज्ञानिक समाधानहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ढोकाहरू बिरामीहरूलाई पीडा कम गर्न मद्दत गर्ने बारेमा बढी चिन्तित छन्।
1 199 199 In मा, जीट दम्पतीको पहिलो अफ्रिकी यात्राले उनीहरूको पछिल्ला अनुभवीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। जाइरमा महिला, खुट्टाको खुट्टालाई जगमा लगिसकेको थियो, बच्चालाई केही किलोमिटरसँग केही माईलसम्म अँगाले। केन्यामा उनीहरूलाई मकैले परिधिमा भाग लिन आमन्त्रित गरियो। अफ्रिकामा उनीहरूले पनि सडकमा थुप्रै भोकाएको बच्चाहरूलाई पनि देखे। यी सबै मिरिन्डा बनाउँदछन् र मुटुको फाउन्डर समस्या हुन्छ। त्यस पछि उनीहरूले "विश्व विकास रिपोर्ट" भेट्टाए र भित्र सामग्री चकित छ। मेलिन्डाले भनिन्: "अफ्रिकी बच्चाहरू पखालामा र अन्य धेरै साधारण रोगहरूमा मर्नेछन्, जबकि सरल खोपले यी त्रासदीबाट बच्न सक्दछ।" मेलिन्डाले पैसा कमाउँदछन् र अफ्रिकाको चिकित्सा र गरिबीको लागि उत्साह, तर उनी सोच्दैनन् कि केवल आफ्नै शक्तिले यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ। "हाम्रो प्रयासहरू समुद्रमा केवल एक पातलो छ समस्याको सापेक्ष छ।
आधुनिक संगीतकार यानी
यानी, 14 नोभेम्बर 1949कोमामाटा, ग्रीस, अमेरिकी संगीतकारमा। संसारको प्रसिद्ध नयाँ शताब्दीको संगीत रचनाकार र कलाकार; उनीहरूको...
अलीबाबा संस्थापक ज्याक मा
मा यु यू, सेप्टेम्बर १०, १ 64 6464 मा चीनको झेजियांग प्रान्त, हzhou्ग्जाउमा जन्मदै प्रख्यात उद्यमी र परोपकारी हुन्। ऊ अलीबाबा...